Carvedilol vs. metoprolol: मतभेद, समानता, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, चेकआउट समाचार समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार कम्पनी कल्याण औषधि जानकारी, समाचार समुदाय, कम्पनी
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Carvedilol vs. metoprolol: मतभेद, समानता, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Carvedilol र metoprolol उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) र हृदय समस्याहरु जस्तै मुटुको विफलता को उपचार गर्न प्रयोग औषधि हो। यी औषधीहरू पनि हृदयघातको कारण मृत्युको जोखिम कम गर्न (मायोकार्डियल इन्फेक्शन) प्रयोग गर्न सकिन्छ।
दुबै कोरेभिडोल र मेट्रोपोलोल वर्गीकृत गरिएको छ बीटा ब्लकरहरू , बिटा-एड्रेनर्जिक ब्लक गर्ने एजेन्टको रूपमा पनि चिनिन्छ। तिनीहरू बीटा रिसेप्टर्सलाई ब्लक गरेर कार्य गर्दछन् जसले मुटु र रक्त वाहिकाहरूमा नोरेपाइनफ्रिन र एपिनेफ्रिनको प्रभावहरू रोक्दछ। बीटा-ब्लकरहरू रक्तचाप कम गर्दछ र मुटुको तनाव कम गर्न हृदय गति सुस्त बनाउँदछ।
Carvedilol र metoprolol दुबै जेनेरिक औषधि हो। यद्यपि उनीहरूले समानताहरू साझा गर्छन्, तिनीहरूसँग डोज, फॉर्मूलेसन, र साइड इफेक्टहरूमा पनि फरक छ।
कार्वेडिल र मेटोप्रोलोल बीचको मुख्य भिन्नता के हुन्?
Carvedilol एक गैर-चयनित बीटा-ब्लकर मानिन्छ। यसको मतलव कोरेभिडोलले दुबै बीटा १ रिसेप्टर्स र बीटा २ रिसेप्टर्स रोक्न सक्छ। बीटा १ रिसेप्टर्स मुटुमा भेटिन्छ जब बीटा २ रिसेप्टर्स मुख्यतया चिल्लो मांसपेशीहरूमा पाइन्छ। कार्वेडिलले धमनीहरूमा अल्फा रिसेप्टर्स पनि रोक्दछ, जसले कम रक्तचापमा मद्दत गर्दछ।
कोरवेडिल कोरेगको जेनेरिक नाम हो। यो सामान्यतया 12.१२5 मिलीग्राम, .2.२5 मिलीग्राम, १२..5 मिलीग्राम, वा २ mg मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेट दैनिक दुई पटक लिइन्छ। Carvedilol एक विस्तारित-रिलीज फारममा उपलब्ध छ (Coreg CR) जुन दैनिक एक पटक लिन सकिन्छ।
मेट्रोप्रोल एक बीटा १ चुनिंदा अवरोधक हो जसले मुख्य रूपमा मुटुमा बीटा १ रिसेप्टर्स रोक्दछ। यद्यपि यसले बीटा २ रिसेप्टर्सलाई ब्लक गर्छ, यद्यपि कम डिग्रीमा। छनौट बिटा-ब्लकरहरू गैर-चयनित बेटा-ब्लकरहरूको तुलनामा थोरै फरक प्रभावहरू हुन सक्दछ।
Metoprolol दुई फरक नुन प्रकारहरु मा आउँछ: metoprolol tartrate र metoprolol सक्सिनेट । मेट्रोप्रोल टार्टरेट, ब्रान्ड नाम लोप्रेसर द्वारा पनि चिनिन्छ, एक तत्काल रिलीज मौखिक ट्याब्लेट हो जुन २ mg मिलीग्राम, .5 37..5 मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, mg 75 मिलीग्राम, र १०० मिलीग्रामको शक्तिमा आउँदछ। मेट्रोप्रोल सुसीनेट, जसलाई ब्रान्ड टोपोल एक्सएल द्वारा पनि चिनिन्छ, एक विस्तारित रिलीज मौखिक ट्याब्लेट हो जुन २ mg मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, १०० मिलीग्राम, र २०० मिलीग्रामको शक्तिमा आउँदछ।
सम्बन्धित: Metoprolol vs. Atenolol
Carvedilol र metoprolol बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग बीटा-ब्लकर बीटा-ब्लकर
ब्रान्ड नाम के हो? कोरेग (तत्काल रिलीज)
कोरेग सीआर (विस्तारित रिलीज) Lopressor (तत्काल रिलीज)
Toprol XL (विस्तारित-रिलीज)
मानक खुराक के हो? Carvedilol (तत्काल रिलीज): २ mg मिलीग्राम दैनिक दुई पटक
Carvedilol (विस्तारित-रिलीज): दैनिक रूपमा १० देखि mg० मिलीग्राम
खुराक उपचार गरीरहेको अवस्थामा निर्भर गर्दछ मेट्रोप्रोल टार्टरेट (तत्काल रिलीज): to० देखि १०० मिलीग्राम दैनिक दुई पटक
Metoprolol सक्सिनेट (विस्तारित-रिलीज): दैनिक २ once देखि १०० मिलीग्राम
खुराक उपचार गरीरहेको अवस्थामा निर्भर गर्दछ
सर्तहरू carvedilol र metoprolol द्वारा उपचार
दुवै carvedilol र metoprolol सक्सीनेट एफडीए ischemia, उच्च रक्तचाप, वा कार्डियोमायोपैथी को कारण हृदय असफलताको उपचार गर्न अनुमोदित हो। दुबै बीटा-ब्लकरहरू उच्च रक्तचापको उपचार गर्न पनि अनुमोदित छन्।
बीटा-ब्लकरहरू सामान्यतया अन्य औषधिहरू जस्तै प्रयोग गरिन्छ एंजियोटेन्सिन-रूपान्तरण एन्जाइम (ACE) अवरोधकर्ताहरू र मूत्रवर्धक। सिस्टोलिक वा डायस्टोलिक रक्तचाप कम गर्नाले हृदयघात वा स्ट्रोक जस्ता हृदय घटनाको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
Carvedilol र metoprolol विकृति र मृत्यु को जोखिम कम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ हृदयघात । यी औषधीहरूले पनि हृदयघातको पछि बायाँ ventricular dysfunction को उपचार गर्न सक्छ।
दुबै औषधीहरू एन्जाइना पेक्टोरिस, वा छाती दुख्ने, कोरोनरी हृदय रोगको कारण हुने उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। Carvedilol वा metoprolol हृदय रोग वा हृदय विफलता को साथ ती एनजाइना आक्रमण कम गर्न र व्यायाम क्षमता सुधार गर्न निर्धारित गर्न सकिन्छ।
Carvedilol र metoprolol को अफ-लेबल प्रयोगहरू एरिटिमियास, वा असामान्य हृदय लय जस्तै एट्रियल फाइब्रिलेशनको उपचार समावेश गर्दछ।
सर्त Carvedilol मेट्रोप्रोल
मुटुको असफलता हो हो
एनजाइना पेक्टोरिस अफ-लेबल हो
एरिथिमिया अफ-लेबल अफ-लेबल
के कार्वेडिलोल वा मेट्रोप्रोल बढी प्रभावकारी छ?
को Carvedilol वा Metoprolol यूरोपीयन परीक्षण (COMET) एक यादृच्छिक नियन्त्रित परीक्षण हो जुन लामो हृदय विफलताका बिरामीहरूमा कार्वेडिल र मेटाप्रोलसँग तुलना गर्दछ। यो परीक्षण लगभग than बर्षमा १,500०० भन्दा बढी बिरामीहरूमा आयोजित गरिएको थियो। परिणामहरू, जुन प्रकाशित गरियो लान्सेट , metoprolol को लागी 40% बनाम carvedilol को लागि 34% को एक सबै कारण मृत्यु देखायो। अर्को शब्दहरुमा, carvedilol metoprolol भन्दा हृदयको विफलता बिरामीहरुमा बाँच्न वृद्धि गर्न पाए।
बाट एक २०२१ तुलनात्मक अध्ययन अमेरिकी जर्नल कार्डियोलोजी बायाँ निलय इजेक्शन 40०% भन्दा बढि बिरामीहरूमा कार्वेडिल बनाम मेटोप्रोलोलको साथ हार्ट अट्याक पछि हार्ट अटैक पछि अस्तित्व दरमा कुनै खास भिन्नता फेला परेन। जहाँसम्म, 40०% भन्दा कम बायाँ भेन्ट्रिकुलर इजेक्शन अंशको साथमा, कार्वेदिलोल अधिक प्रभावकारी बिटा-ब्ल्कर हुन सक्छ।
एक अनुसार मेटा-विश्लेषण , carvedilol र metoprolol प्रभावकारितामा समान छन् जब हृदयघातको पछि प्रयोग गरिन्छ। जब प्लेसबोको तुलनामा, दुबै बीटा-ब्लकरहरू हृदय घटनाहरू र त्यस पछि हृदयघातको उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न पाए। यद्यपि, सबै कारण मृत्युदर, रेवास्क्युलाइजेशन, र अस्पताल भर्ना या त carvedilol वा metoprolol को लागी कुनै खास फाइदाहरू भेटिएन।
37 को एक hematocrit पढाइ के संकेत गर्दछ
दुबै carvedilol र metoprolol हुन सक्छ प्रभावकारी उपचार विकल्पहरू । उपचार उपचार अवस्था, सम्भावित साइड इफेक्ट, र लागत को आधारमा निजीकृत हुन सक्छ। तपाईंको लागि उत्तम उपचारमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
कभरेज र कारवेदिलोल बनाम मेटोप्रोलोलको लागत तुलना
Carvedilol अधिकांश चिकित्सा र बीमा योजनाहरु द्वारा कभर गरिएको छ। कोपे योजनाको सूत्र र कभरेजमा निर्भर गर्दछ। Carvedilol को औसत नगद मूल्य १$० को आसपास छ। बिमा संग पनि, carvedilol महंगा हुन सक्छ। Carvedilol को लागी एक एकलकेयर छुट कार्ड प्रयोग गरी बाहिरको जेब लागतलाई लगभग $ to सम्म कम गर्न सक्दछ।
मेट्रोप्रोल पनि अधिकांश मेडिकेयर र बीमा योजनाहरु द्वारा कभर गरिएको छ। तपाईको फार्मासिष्ट वा बिमा योजनाको परामर्श लिनुहोस् कि मेट्रोप्रोलोलको लागि कोपे के हुन्छ भनेर। मेट्रोपोलोलको औसत नगद मूल्य १ around8 डलर जति छ। Metoprolol tartrate वा metoprolol Succinate को लागी एक एकलकेयर छुट कार्डले तपाईंलाई प्रिस्क्रिप्शनको लागतमा महत्वपूर्ण बचत गर्न मद्दत गर्दछ।
मात्रा Tablets० ट्याब्लेट (.2.२5 मिलीग्राम) Tablets० ट्याब्लेट (२ mg मिलीग्राम)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 0– $ 15 $ 0– $ 65
कोरेभिडोल बनाम मेटोप्रोलोलको साझा साइड इफेक्टहरू
Carvedilol र metoprolol उस्तै साइड इफेक्ट साझा। कर्वेदिलोलको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू भनेको चक्कर, थकान, कमजोरी, कम रक्तचाप (हाइपोटेशन), पखाला, उच्च रक्त शर्करा (हाइपरग्लिसेमिया), ढिलो हृदय गति (ब्राडीकार्डिया), र तौल वृद्धि। मेटाप्रोलोल थकान, चक्कर, डाइरिया, खुजली र डिप्रेशनको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू।
कार्वेडिल र मेटोप्रोलोलको गम्भीर साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ, जस्तै एलर्जी प्रतिक्रियाहरू, खतरनाक रूपमा कम रक्तचाप, र ब्रोन्कोस्पासम वा सास फेर्न। यदि तपाईंलाई गम्भीर दाग, सूजन वा सास फेर्न समस्या पर्‍यो भने कार्वेडिल र मेटोप्रोलोल लिइसकेपछि तत्काल मेडिकल उपचार लिनुहोस्।
चक्कर हो %२% हो १०%
थकान हो २%% हो १०%
Hypotression हो %% हो १%
पखाला हो १२% हो %%
Hyperglycemia हो १२% हो *
कमजोरी हो %% हो १०%
सुस्त मुटुको दर हो %% हो %%
तौल हो १०% हो *
सासको कमी हो * हो %%
चिसो उग्रता हैन - हो १%
डिप्रेसन हो <1% हो %%
खुजली हो <1% हो %%
स्रोत: डेलीमेड ( Carvedilol ), डेलीमेड ( मेट्रोप्रोल )
Carvedilol बनाम metoprolol को ड्रग अन्तर्क्रिया
दुबै कार्वेडिलोल र मेट्रोप्रोलले रक्तचाप कम गर्न र मुटुको दर सुस्त बनाउन सक्छ। तसर्थ, तिनीहरू अन्य औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन् जुन समान प्रभावहरू छन्। दुवै carvedilol र metoprolol, प्रायः बिटा-ब्लकरहरू जस्तै, रक्तचाप कम गर्ने एजन्टहरू, मोनोमाइन अक्सिडेज इनहिबिटरहरू (MAOIs), र क्याल्सियम च्यानल ब्लकरहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन्। यी औषधिहरू सँगै लिएर खतरनाक रूपमा कम रक्तचाप वा कम हृदय दरको जोखिम बढाउन सक्छ।
Carvedilol र metoprolol मुख्यतया CYP2D6 एन्जाइम द्वारा कलेजोमा प्रशोधन गरिन्छ। यस एन्जाइमलाई अवरोध गर्ने ड्रगहरूले कारवेडिल र मेटोप्रोलोलसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन्, जसले कारभेडिल र मेटोप्रोलोलको स्तर वृद्धि गर्दछ। कार्वेडिल र मेटोप्रोलोलको रगतको स्तर बढ्यो भने यसले साइड इफेक्टको बढि जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
बीटा-ब्लकरहरूले रगतमा चिनी-कम गर्ने प्रभावहरू मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक औषधिहरू जस्तै ग्लिपाजाइड, मेटफर्मिन, वा इन्सुलिन बढाउन सक्छ। जब यी औषधिहरू सँगै लगिन्छ भने सावधानी अपनाउनुपर्दछ।
अन्य सम्भावित ड्रग अन्तरक्रियाको लागि तल तालिका हेर्नुहोस्।
औषधि औषधि वर्ग Carvedilol मेट्रोप्रोल
रिजर्पाइन अल्फा-एड्रेनर्जिक एजेन्टहरू हो हो
Nifedipine क्याल्सियम च्यानल ब्लकरहरू हो हो
Terbinafine CYP2D6 अवरोधकर्ताहरू हो हो
सीतागलिप्टिन मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक्स हो हो
एर्गोटामाइन अर्गोट एल्कालोइड्स हो हो
हाइड्रालाजाइन Vasodilators हो हो
Dipyridamole प्लेटलेट अवरोधकर्ताहरू हो हो
Carvedilol र metoprolol को चेतावनी
बीटा-ब्लकरहरू अचानक बन्द गर्न हुँदैन। यसको सट्टामा, तिनीहरू बिस्तारै कम खुराकमा टेपर हुनुपर्दछ। बिटा-अवरोधकले अचानक बन्द गरेपछि बिग्रेको कोरोनरी धमनी रोग, एनजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, र वेंट्रिकुलर एरिथमियासको बढ्दो जोखिम हुन सक्छ।
बीटा ब्लकरहरू hypoglycemia को लक्षणहरू मास्क गर्न सक्छन् वा hyperthyroidism जस्तै छिटो मुटुको दर। मधुमेह बिरामीहरू र थाइरोइड समस्या भएकाहरूले बिटा-ब्लकरहरूसँग सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन सक्छ।
दुबै कार्वेडिल र मेटोप्रोलोलले ब्रोन्कोस्पाज्मको चेतावनी दिन्छ, विशेष गरी दीर्घकालीन अवरोधक पल्मोनरी रोग (सीओपीडी) वा अन्य सासको समस्या भएका व्यक्तिहरूमा। यद्यपि अध्ययन देखाईएको छ कि बीटा-ब्लकरहरूले वास्तवमा exacerbations घटाउन सक्छ र COPD भएकाहरूमा अस्तित्व बढाउन सक्छ।
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई बताउनुहोस् यदि तपाईं कन्जेस्टिभ मुटुको विफलता, दमा, ढिलो मुटुको धड्कन, कलेजो समस्या, वा carvedilol वा metoprolol मा अवयवहरू को एलर्जी प्रतिक्रिया छ। अन्य चेतावनी र carvedilol वा metoprolol को उपयोग संग सम्बन्धित सावधानीहरूको लागि एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग परामर्श गर्नुहोस्।
अक्सर carvedilol बनाम metoprolol को बारे मा प्रश्नहरु
कोरेभिडोल भनेको के हो?
Carvedilol एक बीटा-अवरोधक औषधि हो जुन हृदय विफलता र उच्च रक्तचापको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो हृदयघातको पछि बाँच्न बढाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। Carvedilol तत्काल रिलीज र विस्तारित रिलीज फारमहरु मा आउँछ। यो १ 1995 1995 F मा एफडीए स्वीकृत भएको थियो।
मेट्रोप्रोल एक बिटा-ब्लकर औषधि हो जसले हृदय विफलता, उच्च रक्तचाप र छातीको पुरानो दुखाइको उपचार गर्न सक्छ। मेट्रोपोलोल सक्सिनेट, मेट्रोप्रोलोलको विस्तारित-रिलीज फारम पनि हृदय विफलताको उपचार गर्न एफडीए अनुमोदित छ। तत्काल रिलीज मेट्रोप्रोलोलमा मेट्रोप्रोल टार्टरेट हुन्छ। मेट्रोप्रोल सुरुमा १ 197। Initially मा एफडीए स्वीकृत भयो।
के carvedilol र metoprolol उस्तै हो?
दुवै carvedilol र metoprolol बीटा-एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लकरहरू, वा बिटा-ब्लकरहरू हुन्। ती दुवै पुरानो हृदय असफलता र उच्च रक्तचापको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि, तिनीहरूमा फरक सक्रिय सामग्रीहरू छन् र अलिक फरक तरीकाले कार्य गर्दछ। Carvedilol एक गैर-छनौट बिटा-अवरोधक हो र metoprolol एक बीटा -१ चयनित बीटा-ब्लकर हो।
के carvedilol वा metoprolol राम्रो छ?
कार्बोभाल र मेट्रोप्रोल दुबै अत्यधिक प्रभावकारी औषधि हुन् जब प्लेसबोको तुलनामा। अनुसार, हृदय असफलता भएका केहि बिरामीहरूको लागि कारवेदिलोल राम्रो हुन सक्छ COMET परीक्षण । Carvedilol र metoprolol उस्तै समान प्रभावकारी छ हृदयघातको पछि बाँच्न बढाउनको लागि। दिशानिर्देशहरू अमेरिकन कलेज अफ कार्डियोलोजी (एसीसी) र अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (एएचए) बाट कम ईजेक्शन फ्रक्शनको साथ हृदय विफलता भएका बिरामीहरूको लागि या त कार्भेडिल, मेटोप्रोलोल सुसीनेट, वा बिसोप्रोलोलको सिफारिस गरिएको छ। तपाईंको विशिष्ट अवस्थाको लागि उत्तम उपचार विकल्पको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
दस्त zoloft को एक साइड इफेक्ट हो
के म गर्भवती हुँदा कार्वेडिल र मेटोप्रोलोल प्रयोग गर्न सक्छु?
बीटा ब्लकरहरू हुन् सामान्यतया प्रयोग गर्भवती महिलाहरूमा मुटुको अवस्थाको साथ। जे होस्, त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन जुन सुझाव दिन्छ कि बीटा-ब्लकरहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित वा गर्भावस्थाको दौरान हानिकारक छन्। दुबै कार्वेडिलोल र मेट्रोप्रोलले भ्रुण क्षतिको जोखिम लिन सक्छ। गर्भावस्थामा बीटा-ब्लकर प्रयोग गर्नु अघि स्वास्थ्य सल्लाह प्रदान गर्नेलाई स्वास्थ्य सल्लाह प्रदान गर्नुहोस्।
म मदिराको साथ carvedilol वा metoprolol प्रयोग गर्न सक्छु?
रक्सीको साथ बीटा-अवरोधक संयोजन गर्दा साइड इफेक्टको बृद्धि जोखिम हुन सक्छ। मदिराको साथ carvedilol वा metoprolol लिदा निन्द्रा, चक्कर, र कम रक्तचापको जोखिम बढ्न सक्छ। रक्सीले बीटा-ब्लकरहरूको प्रभावकारिता पनि कम गर्न सक्छ।
के carvedilol metoprolol भन्दा रक्तचाप कम छ?
कार्वेडिलले रक्तचाप मेटाप्रोल भन्दा बढी कम गर्न सक्छ। यो किनभने carvedilol vasodilating गुणहरु छ कि रक्त वाहिका र कम रक्तचाप आराम गर्न मद्दत छ। कुनै अध्ययनले रक्तचापलाई कार्वेडिल र मेटोप्रोलोलको प्रभावहरूलाई सीधा तुलना गरेको छैन। जे होस्, carvedilol मद्दत गर्न सक्छ हृदय घटनाहरू रोक्नुहोस् उच्च रक्तचाप बिरामीहरूमा metoprolol भन्दा बढी।
के तपाईं मेट्रोप्रोलबाट कार्वेडिलमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ? / के यो बेटा ब्लकरहरू स्विच गर्न सुरक्षित छ?
सामान्यतया बेटा-ब्लकरहरू स्विच गर्न सुरक्षित हुन्छ यदि आवश्यक छ वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकद्वारा सिफारिस गरेमा। बीटा-अवरोधकमा निर्भर गर्दै, स्विच तुरुन्त हुन सक्छ वा प्रारम्भिक बीटा-ब्लकरको खुराक दुध लिन सकिन्छ जबकि नयाँ बिटा-ब्लकरको खुराक बिस्तारै लक्षित खुराकमा बढाइन्छ। नयाँ बीटा-ब्लकरको प्रभावकारिताको आकलन गर्न अनुगमन भ्रमणहरू आवश्यक पर्दछ।
कार्भेडिलको लागि राम्रो प्रतिस्थापन के हो?
Carvedilol को लागि उत्तम प्रतिस्थापन उपचार भइरहेको अवस्था मा निर्भर गर्दछ। केवल दुई औषधिहरू छन् एफडीए-अनुमोदित हृदय विफलताको उपचार गर्नका लागि बाहेक अन्य कार्भिडिल: बाइसोप्रोलोल र मेट्रोपोलल सक्सिनेट। बीटा-ब्लकरहरूको अन्य उदाहरणहरूमा एटेनोलोल, नेबिभोलोल, र प्रोप्रेनोलोल समावेश छ।
के त्यहाँ मेट्रोपोलोल भन्दा राम्रो बीटा अवरोधक छ?
मुटुको असफलताको उपचारको लागि मेट्रोपोलल सक्सिनेटको सम्भावित विकल्पहरूमा बिसोप्रोलोल र कार्वेडिलोल समावेश छ। राम्रो बेटा अवरोधक एक तपाइँको लागि उत्तम कार्य गर्दछ। अन्य कारकहरूले बीटा अवरोधक छनौट गर्न भूमिका खेल्न सक्दछ, जस्तै लागत, साइड इफेक्टहरू, र तपाईंले लिनुहुने अन्य औषधीहरू।
5 सर्वश्रेष्ठ बच्चाहरु भिटामिन: तुलना, किन्नुहोस् र बचत गर्नुहोस्
Keflex को लागी सामान्य नाम के हो
एक आतंक र चिन्ता हमला को बीच फरक
के म रक्सी पिए पछि ibuprofen लिन सक्छु?
Dilaudid दुखाइ राहत को लागी कति लामो हुन्छ
कसरी एक खमीर संक्रमण बाट खुजली रोक्न